Bare Hiiraale Oo Maanta Sharxay Wixii Lagula Heshiiyay +COD+SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Bare Hiiraale Oo Maanta Sharxay Wixii Lagula Heshiiyay +COD+SAWIRO
Munaasabad ballaaran oo kasoo qeyb galeen Waxgarad, Siyaasiyiin, Aqoonyahan, Odayaal, iyo Haween oo warbixin looga dhageysanayay Col, Barre Aaden Shire (Barre Hiiraale) ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Barre Hiiraale oo warbixin dheer oo ku saabsan marxaladihii kala duwanaa ee soo mareen hanaanka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka goobta ka akhriyay, ayaa waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay in laga wada qeyb-qaato nabadda Gobalada Jubbooyinka, taasina ay tahay masuuliyad saaran qof waliba oo Soomaali ah, loogana fadhiyo dadka Jubbooyinka in ay meel uga soo wada jeestaan colaada iyo khilaafaadka dhexdooda ah.
“Dadka dagan Jubbooyinka waxaa hareeyay dhib badana u geystay colaad iska socota oo meel ay ku dhamaanayso aan la garanayn maanta waxaan hortiina ka sheegayaa in uu dhammaaday khilaafkii Jubbooyinka dadkuna u gudbeen waji kale oo xal gobolladaas loogu raadinayo, waxan isla afgaranay wafdigii Goobweyn noogu yimid in Dib u heshiisiin daba socota shirarkii addis iyo Muqdisho lagu qabto Kismaayo”. ayuu yiri Barre Hiiraale oo intaasi ku daray :
“Dowladda Federaalka iyo beesha Caalamka waxaan ka sugaynaa dhamaystirka inta dhiman heshiiskan iyo qabyo tirkiisa”
Dhinaca kale waxaa uu sheegay in magaalada Kismaayo oo astaan u aheyd magaalo dagaal ay hadda qorsheynayaan inay noqoto magaalo nabadeed, oo aan dagaal danbe ka dhicin, haddii si sax ah loo fuliyo hishiiska Goobweyn dhawaan lagu wada gaaray.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Ahlusuna ahna hoggaamiyayaashii hishiiskii dalka looga saaray KMG ah Shiikh Maxamed Yusuf Awlibaax, oo ka mid ahaa mucaaradka ugu waa weyn ee maamulka Jubba ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadan, waxaana uu sheegay in hishiiska Goobweyn ay u qaataan kadib markii wax badan la isaga soo dhawaaday, isagoona sheegay in waxa dhiman loo baahan yahay in lagu dhameystiro shirka Kismaayo.
Dowlada Soomaaliya, IGAD iyo dhamaan xubinii ka shaqeeyey hishiiska Goobweyn waxaan u sheegeynaa in laga doonayo kasii shaqeynta in la meelmariyeo wixii lagu hishiiyey, islamarkaana ay ka shaqeeyaan in aan magaaladaasi dib danbe loogu dagaalin. Annaguna dhankeena sida uu Barre Hiiraale hishiiska u soo saxiixay ayaanu la qabnaa, oo aan ku taageereynaa” ayuu yiri Shiikh Awlibaax.
Madaxweynihii hore ee Galmudug Col, Maxamed Caalim ayaa waxaa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay go’aanka iyo hishiiska uu Col, Barre Hiiraale kula soo galay dowlada iyo IGAD magaalada Goobweyn, isagoona intaasi raaciyey inuu hishiiskaasi albaab cusub u furayo nabadeynta gobollada Jubba iyo Gedo.
Guddoomiyaha beelaha Hawiye Maxamed Xasan Xaad ayaa dhankiisa waxaa uu sheegay inay soo dhaweynayaan hishiiskaasi, waxaana uu sheegay in wasiirkii hore ee gaashaandhiga Col, Barre Hiiraale uusan hishiis dadka wax u dhimaya laga sugeyn balse uu yahay raga wadaniyiinta ah ee dalkan difaaciisa diyaarka u ah.
“Barre Hiiraale waa geesi,waana wadani. Waxaana ku aqaan inuu hishiis nabadeed iyo mid colaadeed yaqaan. Marka waxaa laga doonayaa qolada hishiiska la soo gashay inay hishiiskaasi dhameystiraan.” ayuu yiri Mr, Xaad.
Qaar kamid ah Waxgaradkii iyo siyaasiyiintii shirka kasoo qeyb galay ayaa ku tilmaamay go’aanka Barre Hiiraale tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca nabad-sameynta iyo qaran-dhisidda Soomaaliya. Waxana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin doorkooda in ay qaataan.